3 Zvidimbu Zvirongwa Zvokudzivirira IT Project Kukundikana | ITS
3 Zvidimbu Zvirongwa Zvokudzivisa IT Project Kusakundikana
Mabasa anogara asingazivikanwi, akabatanidzwa nezvikamu zvisingaverengeki uye anounza matambudziko akasiyana kune avo vanobatanidzwa. Chaizvoizvo chinowedzera hachiwanzoenda nenzira yatinovada nayo. Tinogara tichipfuurira tichiitwa chikumbiro chekuita zvakawanda nezvishoma uye nekukurumidza kupfuura zvatinenge tine. Nguva zhinji, isu tiri kubereka mukuedza kwedu pasinei nekudzivirirwa.
Zvizhinji zvakakosha zvikamu zvinowedzera kubudirira kubudirira, zvisinei zvitatu zvezvinokosha zvinobva pakubuda-pamwe chete zvinonzwisisika uchapupu uye kuongororwa, kumanikidzirana kukurukurirana, uye kusiyanisa zvido zvekushandira, kutarisira zvido zvehukama uye huwandu hwebasa.
Wedzera Zvaidiwa, Vatariri Vatarisira uye Maitiro Ebasa
Vashandi vanogona kukanganisa kana kutungamirirwa nekutengesa-kuburikidza nekusarudza kushandura, kufamba kana kuti kuguma-kana kuti vangave vachizviona vachida kutungamirirwa. Mhedzisiro kana kuonekwa kuitika kunogona kunge kwakanaka kana kusina kunaka mumasikirwo.
Kuwanda kwekutenderera kune nhamba yakawanda yevakabatana. Kuziva vose vese vanovaka pfuti yekubudirira kubudirira. Iwe unofanirwa kuchengetedza nekupa ruzivo rwezvinhu zvakakosha pamusoro pezvido zvavo, kutarisana, zvinokanganisa, zvinogona kuiswa, uye zvichida zvichiita pane tsanangudzo yekutengeserana, kugadzirisa uye zvigumisiro zvekupedzisira. Mukuda kwekuwana iyi data, sarudzai vashandi pamwe nemafungiro avo. Izvi zvingaita kuti zvive zvisingatsvaki kukuvaka hurongwa hwekutarisana nemumwe nemumwe. Anowedzera kufungisisa pamusoro pekukosha kwekubatanidza ndeyekuita kuti uite kubudirira.
Ungatarisira sei zvido? Nokukurukurirana. Zvinonyanya kutsoropodza kuti kune humwe hutano hwakakosha huri kuronga hunoenderana nehutano hwekugadzirisa hutano uye shamwari.
Chimwe chikamu chemashoko ekutanga intuition ndechokudzidza nokutaura. Imwe Project Management Institute (PMI®) inoratidza kuti 90 yepakati yemuongorori wemabasa ekukurukurirana ndeyekukurukurirana, sezvo zvingaita, haisi kungorega kutaura munguva pfupi yapfuura. Kutaurirana kwepamutemo kunosanganisira kugadzirisa, kuongorora mishumo, kusika mitsara, kuongorora dhekutanga kubva kune imwe chete kuungana kusvika kune inotevera, nezvimwe zvakadaro. Kuti uite izvi zvakaenzana, unoda kumativi ose anozivikanwa nekukurukurirana kuronga. Kubudiswa kwemhando ipi neipi yakadai kunogona kuparadzaniswa mumibvunzo mitanhatu inofanira kubvunzwa zvisingabviri: Ndiani, Chii, Rini, Kupi, Sei uye Sei?
Ndiani anofanira kupiwa?
Chii chinofanira kupiwa?
Panguva ipi iyo izvozvo zvinoda kuitika?
Ndeipi iyo inofanira kuitika?
Sei zvichifanira kuitika?
Usati watanga kuvepo kwako, iva nechokwadi kuti wakanzwisisa zvinangwa zvose, nzvimbo dzaunoda uye zvinotarisirwa. Kujekesa pane zvinodikanwa uye pakupedzisira kuunganidza kutenga kubva kune vanobatsirana zvakakosha kunokurumidza. Izvi zvinotarisirwa, pamwe chete nezvinangwa zvakarongeka, zvinangwa uye zvinounza, zvinosvika pakukura kwebasa rinofanira kupedzerwa uye richagadziriswa pamusoro pehupenyu hwehutano hwako. Iva sezvazvinogona, pane mukana wekuti iwe usati watanga nekunzwisisa kwakasimba kwezvauri kuedza kuita, haufaniri kutanga nemhando ipi zvayo yemafungiro.
Zvichava zvinotambudza, kana zvisingaitike, kufambira mberi kubva pakuona kwevakaroorana kana pane kusavapo kwekujekesa maererano nekunzwisisa kwavo uye zvido zvavo. Ichi ndicho chikonzero chibvumirano chinofanirwa kuve chakasiyana uye zvishuwo zvavo zvinoparidzirwa panguva yakakodzera muhupenyu hwehupenyu hunogona kutarisirwa pasi pemamiriro ezvinhu.
Kuchengetedza hutatu hunokosha-hunoonekwa hunoonekwa uye kuongororwa kwevashandi pamwe chete, kusikwa uye kushandiswa kwekukurukurirana kunogadzirisa, uye kugadziriswa kwechiratidzo chekushandira zvido zvekushandira, zvido zvehukama uye kukanganisa kwakakwana kwehuwandu hwebasa-pamucheto unobuda ropa mukati mekugadzirira kuronga uye kuuraya kunonyanya kusimbisa simba rekufambira mberi.
Dhiabhorosi Dhiabhorosi Zuva: Sei Kutarisira uye Zvaunofanira Kuita?